သရဲကို ထိကိုင်မိခြင်း – AnZarTone
ကျနော်တို့ ရွာမှာပေါ့ …။ ဦးထွန်းမြင့် ဆိုတဲ့ လူကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ရွာရဲ့ ညနေခင်း အချိန်တိုင်းမှာ ဦးထွန်းမြင့်တို့ အိမ်ကို လာနေကျ လူတစ်ယောက်လည်း ရှိတယ်။ သူက ဦးနီ …။ ညနေဆိုရင် ဦးနီ က ဦးထွန်းမြင့်ရဲ့ အိမ်ကိုလာပြီး ရေနွေးသောက်ရင်း စကား စမြည် ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
ဦးနီ တစ်ယောက် နေထိုင် မကောင်းဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ဦးထွန်းမြင့် တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်း .. မောင်နီ တစ်ယောက် နေမကောင်းလို့ များလား မသိပါဘူး … ဆိုပြီး ဦးထွန်းမြင့် မျှော်နေမိတာပေါ့။ အဲလို ဦးနီ နေမကောင်း ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ် ကျော်ကျော်လောက် အကြာ တစ်ခုသော ညနေမှာပေါ့ …။ ဦးထွန်းမြင့် တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပစ်မှာ ရေနွေးကြမ်း ထိုင်သောက်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ဦးထွန်းမြင့်က မျက်စိ အမြင် သိပ်မကောင်းပါဘူး။
ခပ်မှိုင်းမှိုင်း အချိန် (ညီအစ်ကို မသဲမကွဲ အချိန်) လောက်လည်း ရောက်ရော ဦးထွန်းမြင့် ရေနွေးကြမ်း ထိုင်သောက်နေရာက ဆီးသွားချင်လာတဲ့ အတွက် ကွပ်ပစ် ပေါ်က ဆင်းဖို့ လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ ဗုန်းဆို ဦးနီက သူ့ဘေးနား ရောက်ချ လာရော။ ဦးထွန်းမြင့်က မျက်စိ သိပ်မကောင်းတော့ ဦးနီမှန်း မသိဘူး။ အိမ်တိုင်ပဲ မှတ်ပြီး အဲဒီ အိမ်တိုင်ကို အားယူထဖို့ လှမ်းကိုင် လိုက်တယ်။ လှမ်းလည်း ကိုင်လိုက်ရော ရေခဲတုံး ကို ကိုင်လိုက်ရသလိုမျိုးလို့ပဲ ဆိုပါတော့ …။ အေးစက်စက် အသားစိုင် တစ်ခုကို ကိုင်လိုက်ရလို ဖြစ်သွားတော့ ဦးထွန်းမြင့် နည်းနည်း တွန့်သွားပါတယ်။ စိတ်ထဲလည်း ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားတာပေါ့ …။
ဦးထွန်းမြင့် တစ်ယောက် ဆီးသွားပြီး ကွပ်ပစ်ဆီ ပြန်လာထိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ဦးထွန်းမြင့်ကို လာပြောတယ်။ “ထွေးလေးထွန်း … ဦးနီကြီး စောစောက ဆုံးသွားပြီတဲ့” … ။ အဲဒီ အချိန်မှာတော့ ဦးထွန်းမြင့် ဆပ်စပ် တွေးမိသွားပြီး အင်း … မောင်နီ ငါ့ဆီ လာသွားတာပါလား .. လို့ သိသွားပါတော့တယ် … ။
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ သရဲ၊ တစ္ဆေကို ကိုင်မိခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ရွာက လူကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်သနစ်လေးပါပဲ။ သရဲက ကိုယ်ထင်ပြပြီး ညကြီး သန်းခေါင် ကုတင်ခြေရင်းမှာ မတ်တပ် လာရပ်ပြတဲ့ အဖြစ်တွေကတော့ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ခုလို အမှတ်မထင် သရဲကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ် ဖူးတဲ့ အဖြစ်ကတော့ ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာက ရွာသူားတွေကို ဗဟုသုတ အလို့ငှာ တင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတော့တယ်။
မူရင်းလင့်ခ် – http://mandalaygazette.com/107384/creative-writing
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged သရဲ. Bookmark the permalink.
← Desktop Wallpapers ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
Connection နှေးနေတဲ့အချိန်မှာ Facebook ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ? →